तिम्रो पारीश्रमिक कती ?
हरेक मान्छेको एउटा आफ्नै भित्री सपना हुन्छ । भबिस्यमा यस्तो बन्छु यस्तो गर्छु भन्दै हिंड्ने उसको सपना थियो। संचारकर्मी बन्ने, रेडियोमा बोल्ने समाचार बाचन गर्ने कार्यक्रम चलाऊने। सानै देखी रेडियो सुन्ने गीत गुनगुनाउने रेडियोका कार्यक्रम सुन्ने समाचार सुन्ने उसलाई आदत बसिसकेको थियो।
बिस्तारै ठुलो हुँदै गयो सपना चाहना पनि बढदै गए । आखिर त्यो सपना पनि पुरा भयो तर सोचे जस्तै सहजै भने हैन, केही बिज्ञापनहरु, केही प्रचारात्मक सुचना सन्देसहरुमा ३–४ महिना सम्म आवाज दियो । उसले रहरले बाधेको मन फुक्न सकेन। कहिले बोल्दा भाषाको लवच नमिल्दा, आँफैलाई कमजोर अनुभब गरेको उ आज याद गरिरहेछ ।
सुरु सुरुमा आफु भन्दा अग्रजहरुले लाएको बचन अनी प्राबिधिक साथीहरुको बचन पनि चुनौती अनी अबसर दुबै थियो उ सँग । संगै काम गर्ने कोही साथीलाई देख्दा उ फुरुङ हुन्थियो। आट जोस र जागर मनै देखी पलाउथियो।
सधैं हौसला अनी सहयोग माया दिने साथीहरु जसलाई आज उसले धेरै सम्झिरहेको छ। उनीहरुको संगत ले उसलाई धेरै मजबुत बनएको थियो। संर्घष गर्दै मिडियाको बाटोमा हिड्दा हिडदै २ बर्ष उसको बिती सकेछ । त्यती बेला सम्म उस्लाई थाहा थिएन कि मेरो तलब कती ?
लेखक अरुण वली
अली अली आफुलाई पाल्ने आफुलाई समाजसँग समायोजन् गर्दै जाने पारीश्रमिक पाएको थियो। कतै रेडियो सुन्नेहरुले चिन्न थाले। टाढा बाट फोन गरेर माया दर्सौउदा उसले सोच्थियो यही हो जिन्दगी त् । तर सबै बुझयो मिडिया भित्रको जिबन अनी मिडिया बाट अली टाढा बन्ने सोच बनायो । तर उसको मनले मानेन फेरी अर्को रेडियोमा काम गर्ने अबसर पायो उसले ।
मिडियालाई राज्यले राष्ट्रको ४ औ अंग माने पनि त्यस क्षेत्र भित्र बाँच्न गाह्रो छ् । बर्ष भरीको कमाइले खान लाउन पुग्दैन। ति हुन पत्रकार जस्ले दिनभरी लाखौं करोडौको कुरा गर्छन् । तर साझामा चाउचाउ खाएर सुत्छन ।
जिबन सहज बनाउन हरेक मान्छे कुनै काम परिश्रम गर्न बाध्य हुन्छ । जस्तै उ हिजो मिडियामा आबद्द हुँदा कुनै कार्यक्रमहरुमा पुग्थियो । कुनै ठाउँ तिर घुम्न जादा नै किन नहोस् फलानो मिडियामा काम गर्छु भन्दा ति मान्छेहरुले शहजै सोधथिए ।
-रेडियो मा तलब कती हुन्छ।
उ स्तब्ध !
कलेज पढ्दै थिए कलेजमा साथीहरुले सोधथिए ।
तिमी फलानो रेडियोमा काम गर्छौ है ?
उस्को जवाफ हुनथियो . उम्म हो ।
अनी उनिहरुको अर्को प्रश्न हुन्थियो …तिम्रो तलब चै कती ?
जब गाउ घर पुग्थिए , तब गाउका बुढा बाजे , अंकल अनटी ,अनी घरकै बाबा ममी सम्मको एउटै प्रश्न हुन्थियो ?
तेरो तलब चै कती …?
दिन बित्दै गयो समय बद्लियो समाज बद्लियो तर पत्रकारहरु जो उ जस्तै लोकल रेडियो पत्रपत्रीकामा काम गर्छन उनिहरुको तलब कहिले नि बद्लिएन, मह्गीले मर्कामा पारीरहयो। उ तर आवाज दिन छोडेन पैसा मात्र को लागि काम गरेको थिएन उसले ।
पहिचान अनी सपना पुरा गरेको थियो । रेडियो जिबनलाई करिब ३ बर्ष पछी बिश्राम लगाएको उ परिस्थीती अनी आफ्ना अरु चाहान पुरा गर्न रेडियो छोड्यो तर अहिले पनि उ अन्लाईन मिडियामा आबद्द छ ।
(यदी कसैको जिबन सँग मेल खाएमा त्यो सम्योग मात्र हुने छ।)
प्रकाशित मिती २०७५ असार २५ गते
प्रकाशित मिति : २०७५ असार २५ गते सोमवार